जति छिटो अध्यायदेश, त्यत्ति छिटो मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री: खाँण – News Portal of Global Nepali
21/12/2017 मा प्रकाशित
नेपाली कांगे्रसका नेता बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र सामानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक हुने बताए । संविधानको धारा ८४ (८) बमोजिम संघीय संसद बनेपछि एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व दलहरुले सुनिश्चित गर्न पहिला राष्ट्रियसभा गठन आवश्यक रहेको नेता खाँणले बताए । राष्ट्रपतिले अध्यायदेश अड्काएर राख्नु हुँदैन, जति छिटो अध्यायदेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएर आउँछ, त्यत्ति नै छिटो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने नेता खाँणको भनाइ छ ।
० राष्ट्रियसभा निर्वाचन विवाद के हो ?
– हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौं, संविधानको आधारशीलामा उभिएर मुलुकलाई अघि बढाउने हो । संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्छ, संवैधानिक पद्धति र प्रकृयामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएपछि अविलम्ब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरेर निर्वाचनको एउटा चक्रलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ ।
० राष्ट्रियसभाको निर्वाचनले दलहरुबीच दूरी बढायो होइन ?
– भर्खरै हामीले निर्वाचन सम्पन्न ग-यौं, निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ, अधिकांश ठाउँमा नेपाली कांगे्रसले पराजयको सामना गरेको छ, तथापि हामीले यो परिणामलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरेका छौं । पराजय भयो भन्दैमा संविधान च्यात्ने र बढी सिट जित्यो भन्दैमा संविधान कुल्चन पाइँदैन ।
० कसले रोक्यो राष्ट्रियसभाको अध्यायदेश ?
– त्यत्तिबेला निर्वाचनको प्रकृया सुरु भइसकेको छ, पारित भएन । निर्वाचन घोषणासँगै व्यवस्थापिका संसदको पदावधि सकियो । निर्वाचनको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन अध्यायदेश ल्याउनुप-यो । यसभन्दा अघि पनि अध्यादेशमार्फत् ऐनहरु आएकै छन् ।
० त्यसबेला माओवादी केन्द्र पनि सत्तामै थियो ?
० माओवादी केन्द्रले अध्यायदेश संविधान विपरित छ भनिरहेको छ ?
० काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यायदेश कसरी प्रमाणिकरण हुन्छ ?
० तपाईंहरुको अध्यायदेश काम नलाग्ने भयो, नयाँ सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्छ अरे ?
– समानुपातिको नतिजा अहिले निकाल्न मिल्दैन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भइसकेपछि कुन दलले कतिवटा सदस्य पठायो, ती सबै जोडेर एक तिहाइभन्दा बढी महिला पु¥याउनुपर्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभइ प्रतिनिधिसभाको पूर्ण संख्या आउन सक्दैन ।
– बहुमत देखाउन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दैन ? पहिला धारा ८४ (८) अनुसार महिलाको सहभागिता हुनुप¥यो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको टुंगो लागेपछि प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ ।
० कांगे्रसलाई चाहिँ किन एकलसंक्रमणीय प्रणाली चाहिने ?